Taliska Ciidanka Xoogga dalka iyo kuwa Howlgalka AMISOM oo ku kulmay Muqdisho[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Taliska Ciidanka Xoogga dalka iyo kuwa Howlgalka AMISOM oo ku kulmay Muqdisho[Sawirro]
MUQDISHO – Taliska Ciidamada Xoogga dalka iyo kan AMISOM ayaa shalay ku kulmay xerada Xalane oo ah Taliska ugu weyn ee Howlgalka nabad ilaalinta AMISOM.
Saraakiishan ayaa ka shiray duulaanka lagu qaadayo Al-Shabaab iyo qorshayaasha kale ee amni ee Soomaaliya.
Waxaa kala hoggaaminayey saraakiishan,Taliyaha Ciidamada Xoogga dalka Jen. Cabdweli Jaamac Gorod iyo Taliyaha AMISOM Jen. Cusmaan Nuur Subagle,waxayna kawada hadleen howlgalka dagaal ee la qorshaynayo in dhawaan lagu qaado Al-Shabaab.
Taliyaha Ciidamada Xoogga dalka Jen. Cabdiweli Jaamac Gorod oo dhawaan xilka loo magacaabay ayaa sheegay in dalka uu xaalad adag ku jiro ,wuxuuna ka dalbaday Ciidamada AMISOM in ay gacan ka siiyaan sidii Al-Shabaab looga saari lahaa deegaanada ay ka taliyaan.
Sidoo kale Taliyaha AMISOM Jen. Subagle ayaa sheegay in Ciidamada AMISOM ay ciidamada Soomaaliya ka taageeri doonaan sidii goobaha Al-Shabaab maamulaan looga xorayn lahaa isla markaana ammaanka ku wareejin doonaan.
Wuxuu sheegay in sanadka 2018 oo la qorsheeyey in Ciidamada AMISOM bilaabaan inay ka baxaan dalka Soomaalia aysan suurtagal ahayn in dib loo gurto oo aysan xaaladu hadda waxba iska baddelin.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa booqanaya dalalka ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya,waxaana uu tagay dalalka Uganda iyo Itoobiya oo uu kala hadlay sidii la isaga kaashan lahaa dagaal lagu qaado Al-Shabaab isla markaana dalalka deriska ah ay door weyn ka qaataan.